Ilaa 40- NGO oo Caalami ah ayaa ka dayriyay xaalada Somaliya | maakhir.com
Nairobi:- Ilaa 40- NGO oo Caalami ah ayaa waxay walaac xun ka Muujiyeen Xaalada Bini”adanimo ee ka taagan Dalka Somaliya iyaga oo sheegay inay Dalka ka jiraan Abaaro, Nolo xumo, iyo Nafaqo daro Baahsan, Hay”addahaasi waxay si wada jir ah u soo saareen Qoraal rasmi ah oo ay kaga hadlayaan Xaalada Ka ooga Dalka somaliya,waxay aad uga dayriyeen dagaalada ka hul caya Muqdisho.
Hay’adaha gargaarku waxy sheegeen in hal milyan oo qof oo Soomaali ah ay guryahoodii ka barakaceen ammaan darro iyo gaajo awgood, waxayna kaloo hay’aduhu ku qiyaaseen in bil kasta ay 20- kun oo kale ka cararaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuwaasi oo raadsanaya meel ay Gabaad ka dhigtaan.
Madaxa hey’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ee dalka Somalia, Guillermo Bettochi,waxa uu sheegay in xaaladaha dalka Somalaia ay si aad ah uga sii darayeen,waxa uu sheegay Masuulkaasi in dadka ugu badan ay ku dhibaataysan yihiin Caasimada Somaliya ee Muqdisho.
Mr Bettochi waxa uu aad ugu dayriyay Boqolaalka kun ee Qaxootiga dhibaataysan ah kuwaasi oo ku jira Xeryaha qaxootiga ee ku teedsan Magaalada Muqdisho,waxa uu baaqay Dawlada Somaliya inay il gooni ah ku eegaan dadkaasi.
Madaxa UNHCR waxa uu sheegay in aysan jirin calaamado muujinaya in xaaladdu ay ka soo reyneyso, isagoo intaa raaciyay in kuwa dhibaatada ugu badan ay saameysay ay yihiin dadka rayidka ah oo ku dhinta ama ku barakaca dagaallada ka soconaya Somalia.
Iyada oo ay Hay”addahaasi Digniintaasi soo saareen ayaa hadana wali waxa Caasimada ka hulcaya Dagaalada aan kala go”a lahayn kuwaasi oo ay naf waayeen Kumanaan Ruux halka Boqolaal kalena ay barakeen.
« Nin lagu Fuliyay Qisaas Magaalada Balambale
Gaadhi Ceerigaabo ku foolahaa oo qalibmay iyada oo ay dad ku dhinteen »